Puntland Iyo Galmudug oo Ku Dagaalamay Gaalkacyo. – Shabakadda Amiirnuur
November 23, 2017 11:08 am by admin Views: 549
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxay ku waramayaan in duhurnimadii maanta ay halkaasi ku dagaalameen ciidamo kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland.
Inkastoo warar is khilaafsan ay kasoo baxayaan sababta dagaalka ayaa haddana waxay wararka qaar sheegayaan in lagu dagaalamay canshuur laga qaadayay Bakaar ku yaalla magaalada.
Ugu Yaraan hal qof oo shacab ah ayaa ku dhintay laba kalana waa ay ku dhaawacmeen dagaalka, walow wararka qaar ay sheegayaan in khasaaruhu intaa ka badna yahay. Halka ay sida rasmiga ah ugu hardameen waa suuqa lagu magacaabo dar xumo, waxaana uu dagaalku saameynta ugu badan ku yeeshay bulshada weynta ku dhaqan magaalada, iyadoo la isku adeegsaday hubka Lidka diyaaradaha iyo boobayaasha.
Galmudug ayaa doonayay iney canshuur ka qaataan Bakaarka waxaana ogaaday ciidamada Puntland oo dalbaday in ay iyagu ka qaataan canshuurta ayna khalad tahay in mid kale laga qaado, waana midda keentay in la dagaalamo.
Dhacdadan waa mid kamid ah miraha laga guranayo nidaamka Federalisimka ah ee ay shisheeyuhu keeneen wadanka, wuxuuna tusale cad u yahay halista uu leeyahay nidaamkaas isaga ah ee lagu kala qeybinayo wadanka.